Ilitye eliyigugu leVerdelite luhlaza oluhlaza-ividiyo
Ilitye eliyigugu leVerdelite luhlaza oluhlaza. Senza ubucwebe besiko ngamatye e-verdelite asethwe njengamacici, amakhonkco, isacholo somqala, isongo okanye isangqa. Intsingiselo yeVerdelite.
Thenga i-verdelite yendalo kwivenkile yethu
Luhlobo lwe-tourmaline ngokuthe ngqo luhlaza, ngamanye amaxesha kuthathwa njenge-greenmalmaline eluhlaza kurhwebo. Ngombala ovela kumbane oqaqambileyo ukuya kuluhlaza ubuqili obuluhlaza obenza ukuba kube lilitye elifunwayo kakhulu kusapho lwelitye lombala.
I-crystalline boron silicate yamaminerali edityaniswe nezinto ezifana ne-aluminium, isinyithi, i-magnesium, isodiyamu, i-lithium, okanye i-potassium. Ihlelwa njengelitye elinqabileyo.
I-tourmaline eluhlaza lilungu le-cyclosilicate enamalungu amathandathu anenkqubo ye-trigonal crystal. Kwenzeka njengobude obude, obuncinci ukuya kwi-prismatic kunye neekristal ezinamakholam ezihlala zingunxantathu kwicandelo elinqamlezileyo, zihlala zinobuso obugobileyo. Isitayile sokupheliswa kwiziphelo zeekristale ngamanye amaxesha asymmetrical, ebizwa ngokuba yihemimorphism. Amakristali amancinci amancinci aqhelekileyo kwi-granite efanelekileyo ebizwa ngokuba yi-aplite, ihlala yenza iipateni ezinje nge-radial I-Verdelite tourmaline iyahlukaniswa ziiprism zayo ezinamacala amathathu. Ayikho enye imbiwa eqhelekileyo enamacala amathathu. Iifrimu ebusweni zihlala zinemithambo enzima ethe nkqo evelisa isiphumo esijikeleziweyo esingunxantathu. I-tourmaline eluhlaza ayinqabile ngokugqibeleleyo i-euhedral.
Lilitye elinqabileyo ukunika amandla okuphumeza, amandla aqhubekayo, amandla engqondo ayimfuneko ekufezekiseni eyona nto ifanelekileyo. Iya kutsala iiasethi, uthando kunye nempilo umniniyo ayinqwenelayo. Ilitye liyakunceda ukuba nguvulindlela wendlela eya kwithamsanqa ngokuqinileyo. Lilitye elinqabileyo ukuguqula i-minus ukudibanisa. Iya kuvelisa uthotho lwethamsanqa. Ilitye elinqabileyo likunika ithuba lokucela umngeni kwizinto ezintsha. Uya kufumana ithuba lokufumana ngaphaya kwemiqobo ethintelweyo. Iyakuthintela ekubeni waneliswe yimeko yangoku. Ilitye elinqabileyo elisasaza ngokubanzi ithuba elizayo.
Thenga i-verdelite yendalo kwivenkile yethu yegem
Senza ubucwebe besiko ngamatye e-verdelite asethwe njengamacici, amakhonkco, isacholo somqala, isongo okanye isangqa.
I-verdelite isetyenziselwa ntoni?
I-Green Tourmaline ilungele iinjongo zokuphilisa, njengoko inokugxininisa amandla ayo okuphilisa, ukucoca i-aura, kunye nokususa iibhlokhi. I-Green Tourmaline ihlala isetyenziselwa ukuvula kunye nokusebenza kwe-Heart chakra, kunye nokubonelela ngoxolo kunye nokuzola kwintliziyo nakwinkqubo yeemvakalelo.
Uphi ukuthenga i-verdelite?
Siyathengisa verdelite kwivenkile yethu
Ngaba i-verdelite inqabile?
Iidipozithi eziphambili eziluhlaza ziseBrazil, eNamibia, eNigeria, eMozambiki, ePakistan naseAfghanistan. Kodwa ii-tourmalines eziluhlaza zombala olungileyo kunye nokubonakala okucacileyo zizinto ezinqabileyo nakweyiphi na ilitye eliyigugu. Kwaye ukuba, ukongeza, zikhululekile ngaphandle kokubandakanywa, zinqweneleka kakhulu.
Ngaba iverdelite ixabisekile?
I-greenmalmaline eluhlaza ibiza kakhulu xa inombala oluhlaza okwesibhakabhaka kuyo okanye ibonakala ngakumbi njenge-emerald njenge-chrome tourmaline.